Cây tỏi | Hatgiongtihon.net - trung tâm cung cấp hạt giống tí hơn
Cây tỏi | Hatgiongtihon.net
Đang Đọc: Cây tỏi | Hatgiongtihon.net in Hatgiongtihon.net
Igama lesiNgesi/igama leNzululwazi: Igalikhi
Igama leNzululwazi: I-Allium sativum (L).
Igalikhi sesinye sezona zityalo zindala zisagcinwayo nanamhla oku. Igalikhi ikhona kumazwe amaninzi kwihlabathi jikelele.
0.1 EVietnam, ikonofile ikhuliswe kwiindawo ezininzi:
1 Inkcazo yokuqala yesityalo segalikhi
2 Iimeko ze-Ecological zezityalo zegalikhi
3 Iintlobo zegalikhi emhlabeni naseVietnam
3.1 Igalikhi yePorcelain (iGarlic yaseJamani)
3.2 Igalikhi yaseSpain (iGarlic eBomvu)
3.4 Yintoni ikonofile enesithukuthezi, ikonofile enesithukuthezi?
3.5 ILeek Allium porrum L., yeyosapho lwetswele – iAlliaceae
4 Ukusebenzisa igalikhi kunye ne-leeks ekutyeni kunye neziqholo
5 Iziphumo zokuphilisa igalikhi
5.1 Ummiselo ovela kwigalikhi ta
6 Iziphumo zokuphilisa iiliki
6.1 Ummiselo ovela kwiiliki
EVietnam, ikonofile ikhuliswe kwiindawo ezininzi:
+ IGarlic Ly Son-Quang Ngai: Indawo yesithili siphela imalunga neehektare ezingama-310. Sebenzisa iindidi zethu zegalikhi ekukhuleni (igalikhi yendawo isetyenziswe ixesha elide).
Intsimi yegalikhi eLy Son
+ IGarlic Khanh Hoa: Yonke indawo yokulima ikonofile kweli phondo ifikelele malunga neehektare ezingama-600.
+ Kwi-Ninh Thuan-Phan Rang iindidi zegalikhi: Indawo edumileyo yokukhulisa ikonofile yaseNinh Thuan igxile kwisithili saseNinh Hai, kubandakanya iVinh Hai, Thanh Hai, Xuan Hai, Nhon Hai communes; kwiSixeko. I-Phan Rang – iThap Cham yi-Van Hai commune, iwadi yaseMy Binh… Indawo iyonke yephondo imalunga neehektare ezingama-216.
Ixesha lokuvuna igalikhi lamafama kwiwadi yaseMy Binh, kwisiXeko. Phan Rang – Thap Cham.
Igalikhi ilinywa kakhulu kwamanye amaphondo anje: Bac Giang, Son La, Hai Duong, Hoa Binh… kwaye ityalwa manqaphanqapha kuzo zonke iindawo zaseVietnam.
+ IiLeeks: Ivela kwingingqi yeMeditera, igcinwe kakuhle kwilizwe lethu kwaye iyanyamezela ehlotyeni eMntla Midlands. Okwangoku ikhule kakhulu eDa Lat (Lam Dong).
Inkcazo yokuqala yesityalo segalikhi
Isiqu segalikhi kunye namagqabi: Isiqu si-cylindrical, ezantsi sineengcambu ezininzi ezincedisayo, indawo ephezulu inamagqabi amaninzi. Amagqabi omelele, anemigca, athe tye, 15-50cm ubude, 1-2.5cm ububanzi neenotshi, imiphetho erhabaxa kancinane.
Iibhalbhu zegalikhi kunye nama-cloves: Kwi-axils yegqabi ngalinye kwisiseko, kukho ihlumela elincinci elithi kamva liphuhlise libe yi-clove yegalikhi; La maqebengwana abekwe kunye engxoweni (eyenziwe zizingxobo zamagqabi zangaphambili) kwibhalbhu yeGarlic, engumzimba wetswele (intwasahlobo) yeGarlic. Iibhalbhu zegalikhi zingaphantsi komhlaba.
Iintyatyambo zegalikhi: Iintyatyambo ezicwangciswe kwicanopy phezulu kwesikhondo kwipetali eyi-55cm okanye ngaphezulu ubude. Isiqu sentyatyambo sikhula ngokuthe ngqo kwibhalbhu yegalikhi, iperiant emhlophe okanye epinki igqunywe sisikhondo esinamagqabi avuthulukayo esiphela kwisipikili eside. Iintyatyambo ngoMeyi-Julayi, iziqhamo ngoSeptemba-Oktobha.
Iimeko ze-Ecological zezityalo zegalikhi
Igalikhi sisityalo esikwaziyo ukumelana nokubanda, isityalo sinokukhula kwaye sikhule kwiqondo lobushushu le-18 – 20°C, kwaye ukwenza iiglowubhu kufuneka ukusuka ku-20 ukuya ku-22°C. I-garlic ithanda ukukhanya ixesha elide, ukuba kukho ukukhanya okwaneleyo kwe-12 iiyure / ngosuku, isityalo siya kukhula ngokukhawuleza.
Igalikhi nayo isityalo esithanda amanzi, kodwa ngokumodareyitha. Ukuba kukho ukungabikho kwamanzi, izityalo ziya kuqina, iibhubhu ziya kuba zincinci, kwaye ukuba kukho ukugqithisa kwamanzi, kuya kubangela ukuchithwa kwamanzi, ukubola kwe-tuber, okwenza iibhubhu zingagcini ixesha elide. Igalikhi yohlulwe ibe ziindidi ezi-2: Igalikhi emhlophe: amagqabi aluhlaza amnyama, amakhulu, amagaqa amakhulu, malunga ne-4cm ububanzi. Iibhalbhu zegalikhi zinesikhumba esimhlophe, ngoko kuthiwa yigalikhi emhlophe, olu hlobo lwegalikhi alugcinwanga kakuhle. Igalikhi emfusa: amagqabi atyebileyo, aqinileyo, aluhlaza, aqinile kwaye anesiqholo; Isiqu esikufutshane ne-tuber simfusa. Iiglowubhu zegalikhi ezimfusa zincinci kuneegalbhu zegalikhi ezimhlophe (3.5 – 4cm ubukhulu). Igalikhi inencasa ekhethekileyo ekufuneka ikhuliswe ngobuninzi.
Iintlobo zegalikhi emhlabeni naseVietnam
Igalikhi yohlulwe ngokweendidi ezi-2: I-hard neck garlic kunye ne-soft neck garlic.
I-Hard-necked ikonofile kulula ukuyixobula kune-soft-necked garlic, nangona kunjalo, ikonofile ye-soft-neck inobomi obude be-shelf (iinyanga ezisi-8 ngelixa i-hard-neck garlic idla ngokugcina iinyanga ezi-3-4 kuphela). Ngokutsho kwephephandaba iTheguardian, kukho iindidi eziqhelekileyo zegalikhi ngolu hlobo lulandelayo:
Igalikhi yePorcelain (iGarlic yaseJamani)
Ngenxa yobume kunye nombala wegalikhi emhlophe njengeporcelain, igalikhi ibizwa ngolo hlobo. Le yigalikhi yentamo enzima, iglobhu nganye yegalikhi iqulethe kuphela i-4-5 clove yegalikhi. I-porcelain garlic ihle kwaye ilula, kodwa ivumba legalikhi linamandla kakhulu.
Igalikhi yaseJamani yePorcelain
Igalikhi ineqokobhe langaphandle lendlovu elimhlophe elinemigca emfusa etshintshanayo, negalika eqinileyo enentamo, iglowubhu yegalikhi inkulu kuneporcelain ikonofile, incasa yegalikhi isenamandla kakhulu kwaye inophawu.
Igalikhi enemisonto emfusa
Olu hlobo lwegalikhi lunamasebe amaninzi, ibhalbhu nganye inama-clove egalikhi angama-7-9, incasa yasendle, kodwa kunzima ukuyigcina, ihlume ngokukhawuleza.
Igalikhi emfusa ikhuliswe kwindawo eziphakamileyo zemveli zasePu Bin commune, Noong Luong Mai Chau, Hoa Binh. Abantu abaninzi baya kule ntaba isezintabeni ukuya kuthenga ikonofile yekhitshi labantu bohlanga.
Igama lezenzululwazi leGarlic ePurple yi-Allium sativum, eyibhalbhu encinci, ulusu olumfusa, i-cloves emthubi, iqulethe i-oyile ezininzi ezibalulekileyo, iziqholo, ezinevumba elimnandi.
Igalikhi emfusa luhlobo olukhethekileyo lwegalikhi yaseVietnam.
Umgangatho wekonofile emfusa awukhange uthelekiswe nazo naziphi na ezinye iindidi zekonofile ehlabathini. Igalikhi emfusa iyasebenza kubantu abanesifo segazi elinamafutha, isibindi esinamafutha, uxinzelelo lwegazi oluphezulu, umkhuhlane, ukhohlokhohlo oluzingisileyo, ukulahleka kwamafutha esiswini.
Igalikhi yaseSpain (iGarlic eBomvu)
Ikonofile yaseSpain inombala omfusa otsala amehlo kakhulu, ezinye zinencasa kancinci, ezinye zineswekile eninzi. Olu hlobo ikonofile nalo luhle kakhulu kwaye lukhethekileyo, yiyo loo nto iSpain ililizwe elinesixa esikhulu sokuthunyelwa kwegalikhi kumazwe angaphandle, ngakumbi kwimarike yaseYurophu.
Ikonofile yasendle yahluke kakhulu, ikonofile yasendle ikhula kumahlathi afumileyo aseNgilani. Incasa yegalikhi yasendle ikhetheke kakhulu. Zininzi iindlela zonyango ezisetyenziswayo.
Yintoni ikonofile enesithukuthezi, ikonofile enesithukuthezi?
Igalikhi enesithukuthezi, ekwabizwa ngokuba yi-clove yegalikhi enye, ikonofile yenkedama, ikonofile eyodwa, ikonofile enye, luhlobo oluqhelekileyo lwegalikhi eyenziwe kwiziphene kwinkqubo yokukhula. Esi sityalo sekonofile sikhuliswa kudidi lwegalikhi oluqhelekileyo kodwa lukhula kuphela icloves elinye, ngelixa izityalo zekonofile ezifanayo zivelisa amagaqa ekonofile amaninzi ukwenza ibhalbhu yegalikhi eqhelekileyo. Kumhlaba obharhileyo kunye nohlwempuzekileyo, kulula ukuvelisa olu hlobo lwegalikhi.
EVietnam, le galikhi isasazwa ikakhulu kwisithili saseLy Son, eQuang Ngai nasePhan Rang-isixeko saseThap Cham, kwiphondo laseNinh Thuan, kodwa nakwezinye iindawo nangona ingaziwa kangako (kubandakanya ikonofile kwimarike). ).
ULonely Garlic Ly Son
Iimpawu zeLy Son yegalikhi enesizungu: Ubungakanani bebhalbhu yegalikhi buncinci kwaye buphakathi, bumhlophe, buqinile, iigabhu zegalikhi ezinzima azithambile, zibhityile, xa zityiwa zikrwada, zinevumba elimnandi, eliqholiweyo, eliqholiweyo, elimnandi.
ILeek Allium porrum L., yeyosapho lwetswele – iAlliaceae
I-Herbaceous biennial, i-40-140cm ubude. Umzimba wetswele le-cylindrical okanye ungqukuva, ububanzi obuyi-1-2cm. Amagqabi ayimiqolo emi-2, asicaba okanye asongeke kancinane akwimilo yegutter, buluhlaza bungunda kancinci. I-Roses, ehlelwe kwi-canopy ye-pseudo-spherical, eneziqu ezide, intliziyo eluhlaza okwesibhakabhaka okanye emfusa.
Ukusebenzisa igalikhi kunye ne-leeks ekutyeni kunye neziqholo
Igalikhi ingasetyenziswa njenge-condiment ekudiphini iisosi eziquka isosi yentlanzi, ikonofile, itshili, isosi yesoya, iswekile… Okanye ikonofile ixutywe nemifuno eqhotsiweyo (ingakumbi ivuse uzuko lwakusasa…) ukwenza isitya sivuke. phezulu.ivumba. Igalikhi nayo yenziwe igalikhi kunye nebrine yetshili. Ekuphekeni ezinye izitya ezifana: Igalikhi inyama eqhotsiweyo, inyama eqhotsiweyo kunye nesosi yegalikhi, iiclams eziqhotsiweyo ezinegalikhi, amaphiko enkukhu eqhotsiweyo kunye nesosi yegalikhi … yenye yezitya ekulula ukuzenza, ivumba elimnandi. IiLeeks zihlala zisetyenziswa njengemifuno eqhotsiweyo kunye nenyama yenkomo, yehagu, okanye njengesinongo sesuphu yenyama…
Iziphumo zokuphilisa igalikhi
Ukongeza ekusebenziseni ukupheka, abantu baseVietnam banomkhuba wokusebenzisa ikonofile njengeyeza lokunyanga nokuthintela izifo.
Ukuqulunqwa kweekhemikhali zebhalbhu zegalikhi: Izinto eziphambili kwiGarlic zioli eziyimfuneko, ezinesulfure kunye ne-polysulfur de vinyle; iivithamini A, B1, B2 kunye no-C, izinto ezilwa ne-antibacterial, kuquka i-allycin, i-allycetoin I kunye ne-II, i-allynin enzyme kunye ne-nicotinic acid.
Ukungcamla kunye nesiphumo: Izinongo, zishushu; Inefuthe le-gas-dissolving, i-antiseptic, kunye ne-detoxifying. I-Alliicin sesona sithako sisebenzayo seGarlic, esinqanda ibhaktheriya kunye nomngundo obangela izifo. Kwakhona ineempawu ze-diuretic ngenxa ye-fructosan kunye neoli efunekayo.
Ukusetyenziswa, izibonakaliso kunye neendibaniselwano: Isetyenziselwa ukunyanga: 1. Ingqele; 2. I-Amoebic dysentery, i-bacillus dysentery; 3. Isifo sokudumba sokutya nokungatyisi; 4. Ukudumba ithumba elinye.
Abantu baye badibanisa izigaba ezininzi zeGarlic. I-garlic i-antibacterial kunye ne-antiseptic. Igalikhi ilawula iintyatyambo zamathumbu. Igalikhi liyeza lokunyanga iintshulube ingakumbi iintshulube. Igalikhi ivuselela umzimba kwaye ilawula imisebenzi emikhulu efana nokuphazamiseka kwesibindi kunye namadlala e-endocrine … Igalikhi liyeza lokunyanga isifo seswekile, ukukhusela umhlaza, kunye nokunceda ukulwa nezifo ezinjengeentlungu ze-membrane. .
E-Egypt kangangeenkulungwane ezininzi, abantu bethu basebenzisa ingqayi yewayini efakwe kwiGarlic ukusela. Namhlanje, kuyaziwa ukuba iwayini yegalikhi inefuthe kwi-rheumatism (ukudumba kwamalungu, ukubala kwamalungu, ukukhathala kwamathambo), i-cardiovascular (uxinzelelo lwegazi oluphantsi, uxinzelelo lwegazi, i-valve yentliziyo evulekileyo, i-extrasystoles), ulawulo lwemiphunga (i-bronchitis, i-pharyngitis, i-asthma ye-bronchial. ), ukugaya ukutya (i-indigestion, i-heartburn, i-duodenitis, i-peptic ulcer), i-hemorrhoids yangaphakathi nangaphandle, isifo seswekile. Ukusebenzisa utywala I-Garlic ayibangeli iziphumo ezibi kwaye inefuthe eliphezulu lonyango.
Ummiselo ovela kwigalikhi ta
1. Umkhuhlane: Yitya igalikhi kwaye wenze iGarlic yeeNcinci iiDrops. Sebenzisa i-1-2g yegalikhi entsha ngexesha ngalinye. 2. Unyango lwe-amoebic dysentery, i-bacillus dysentery: i-4-6g yegalikhi ngosuku, isiselo okanye i-pound 10g yeGarlic, ifake kwi-100ml yamanzi abandayo; kwiiyure ezingama-2, hluza intsalela, uthathe amanzi kwi-enema, gcina imizuzu eyi-15. Enema 1 ixesha ngosuku. Ngaxeshanye yitya yonke imihla 6g ikonofile ekrwada yahlulwe amaxesha 3. Emva kweentsuku ezingama-5-7 zonyango, kukho iziphumo.
3. Izilonda, amathumba, ukuvuvukala: I-Garlic Crush, sebenzisa imizuzu eyi-15-20 (ungayishiyi ixesha elide, kulula ukutshisa ulusu). Inokuxutywa ngeoli encinci yeesame kwaye isetyenziswe.
4. Philisa isisu esigcweleyo, ukungaphumeleli komchamo: Igalikhi yokutyumza kwinkaba (ibekwe yodwa ngamagqabi e-guise okanye amagqabi e-betel abunile), kwaye kwangaxeshanye thatha ikonofile etyumkileyo ukusonga umqhaphu kwaye uyifake kwi-anus.
5. Unyango lwe-pinworms, i-hookworms: Yidla rhoqo igalikhi eluhlaza okanye usebenzise ijusi yegalikhi 5-10% 100ml, i-enema kwi-anus.
Iziphumo zokuphilisa iiliki
Ukwenziwa kweekhemikhali: Amacandelo aphambili aziwayo e-tuber yi-alliin (0.4%) kunye ne-alanine, i-arginine, i-asparatic acid, i-asparagine, i-histidine, i-leucine, i-methionine, i-phenylalanine, i-proline, i-serine, i-threonine, i-tryptophane kunye ne-valine. Kukho neeminerali i-Fe, i-Ca, i-P, i-Mg, i-Na, i-K, i-Mn, i-S, i-Si, kunye ne-vitamin B, i-C. Ioli efunekayo yee-tubers iqulethe i-alyl disulphide.
Ukungcamla kunye nesiphumo: Izinongo, zishushu; ivuselela, i-expectorant. Kwakhona kuthiwa iipropathi ziyi-nerve tonic, kulula ukugaya, i-diuretic, i-antiseptic, i-laxative kunye nesondlo somzimba. Enkosi kwiityuwa zealkaline, iiliki ziluchazi olunamandla.
Ukusetyenziswa, izibonakaliso kunye neendibaniselwano: I-leeks idla ngokusetyenziswa njengemifuno eqhotsiweyo kunye nenyama yenkomo, inyama yehagu, okanye njengesinongo kwiisuphu zenyama … Ikwaboniswa ukuba isetyenziswe kwiimeko zokungatyani, i-anemia, i-rheumatism, i-gout, izifo ze-urinary tract, urolithiasis, i-nitrogen – igazi. , ukungaphumeleli kwezintso, ukutyeba, i-atherosclerosis. Isetyenziselwa ngaphandle ukunyanga amathumba, amathumba, cystitis, ukugcinwa komchamo, hemorrhoids, amaqatha kunye calluses, izinambuzane, amanxeba kunye nokuhlamba ubuso.
Kusetyenziswa kwanjani: Ukusetyenziswa kwangaphakathi, inokudliwa iluhlaza, inqunyulwe kwaye ixutywe kunye neminye imifuno eluhlaza; umbala wamanzi okusela okanye isuphu yokupheka, isuphu. Sebenzisa ngaphandle ukuze ufumane incindi yamagqabi kunye ne-tubers exutywe namanzi e-coconut okanye ubisi ukuhlamba ubuso bakho, gcina ulusu lwakho, ukunyanga i-rashes, i-pound pimples kunye namathumba.
Ummiselo ovela kwiiliki
1. Unyango lwe-nitrogen – izifo zegazi: Gcoba i-20g ye-leeks, cwilisa iintsuku ezili-10 kwi-1 ilitha yewayini emhlophe, usele iglasi enye rhoqo kusasa.
2. Unyango lweentshulube: Sityumza iingcambu ezifakwe ebisini ukuze abantwana basele.
3. Nyanga ukugcinwa komchamo, i-cystitis: Sebenzisa iiliki ezi-6, faka i-oyile yeKhokhothi, upheke emlilweni uze ukhuphe ukufudumeza isisu.
Cây Tra Lâm Vồ | Cây cảnh – Hoa cảnh – Bonsai – Hòn non bộ – Sân vườn tiểu cảnh | Hatgiongtihon.net
Dây Leo Tóc Tiên | Hatgiongtihon.net